Tulane University - Ọmụmụ na USA. Education Abroad Magazine
Tulane University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1834
Echefukwala atụle Tulane University
Idebanye aha na Tulane University
Tulane University bụ a onwe alụmdi na e hiwere na 1834.
Nkuzi ụgwọ na Tulane Universityare $50,000 (Aprox.).
Na Tulane University, emi odude ke ogbe ndịda New Orleans, ụmụ akwụkwọ nwere ike na-enwe a eme ihe iche iche - na re-ehiwe - obodo na mara maka ihe karịrị nnọọ ya raucous Mardi Gras ememe. The akwụkwọ na-ekewa n'etiti ihe Uptown campus, isi ebe, na a Downtown campus, etiti maka ahụ ike na sayensị na mmemme. The French nkeji iri na ise, banyere anọ kilomita site na isi n'ogige ụlọ akwụkwọ, na a na-ewu ewu njem nleta ntụpọ mara maka egwú, nightlife na shopping. Freshmen na sophomores ga na-ebi na kampos, ma ọ bụrụ na a na-amụrụ ndụ na mpaghara na nne na nna, bụ di na nwunye ma ọ bụ tọrọ 21. E nwere ihe karịrị 200 -amụrụ òtù on campus, gụnyere ihe 20 sororities na fraternities. Banyere otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụmụ akwụkwọ na-arụ Grik usoro. The Tulane Green Wave sports ìgwè mpi na Division m American Athletic Conference, na na ụlọ akwụkwọ na agba ndị olive green na-acha anụnụ anụnụ. Site Tulane mgbe ọchịchịrị, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịhọrọ site a dịgasị iche iche nke mgbede eme dị ka ihe, ntochi egosi na igbu ọchụ omimi ọzọ. Ebe ọ bụ na Ajọ Ifufe Katrina, ọtụtụ narị ụmụ akwụkwọ a n'afọ ewepụtala onwe na ọha ozi mgbalị iji wughachi obodo.
The ụlọ akwụkwọ nwere a mma-ahuta iwu ụlọ akwụkwọ, na ya School of Public Health na Tropical Medicine bụ nanị ọpụrụiche ụlọ akwụkwọ ụdị ke United States. The akwụkwọ nwetara mere ego site n'aka National Institutes of Health ka ihe International Center of Ọkasị na oria iba Research maka West na Central Africa. Female ụmụ akwụkwọ na Tulane University ụgwọ nkwado site Newcomb College Institute, nke na akwado symposiums na ọbịa ọkà okwu na-enye mentors ka ụmụ agbọghọ. Ọwọrọiso Alumni agụnye mbụ Ọkà Okwu nke Ụlọ Newt Gingrich, okwu show usu Jerry Springer na Onye Okike nke HBO si hit show “entourage,” Douglas R. Ellin.
Undergraduate & ukpep Programs
The mahadum e tọrọ ntọala dị ka Medical College of Louisiana na 1834 nwere obere ka a nzaghachi egwu kịtịkpa, odo fever na ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ na United States. The mahadum ghọrọ naanị ọgwụ abụọ akwụkwọ ke South, na 15th na United States n'oge. na 1847, steeti ome iwu guzosie ike ụlọ akwụkwọ dị ka University of Louisiana, a ọha mahadum, na iwu ngalaba e kwukwara ka mahadum. ekemende, na 1851, mahadum ike ya nke mbụ ya agụmakwụkwọ ngalaba. Onyeisi oche mbụ a họọrọ maka ọhụrụ mahadum bụ Francis Lister hawks, ihe Episcopalian nchụàjà na ndị a ma ama amaala nke New Orleans n'oge.
The mahadum e mechiri site 1861 ka 1865 n'oge American Civil War. Mgbe reopening, ya wee site a oge nke ego nsogbu n'ihi na nke ogologo ugbo ịda mbà n'obi na South nke emetụta mba aku na uba. Paul Tulane, nwe a ọma akọrọ ngwongwo na ákwà azụmahịa, nyere ọtụtụ ezigbo ala n'ime New Orleans maka nkwado nke agụmakwụkwọ. Nke a onyinye mere ka oruru nke a Tulane Educational Fund (TEF), onye osisi nke ọchịchị chọrọ na-akwado University of Louisiana kama guzosie ike a ọhụrụ mahadum. na nzaghachi, site na mmetụta nke mbụ Confederate general Randall Lee Gibson, na Louisiana obodo ome iwu bufee akara nke University of Louisiana na ọchịchị nke TEF na 1884. A na-eme kere Tulane University of Louisiana. The mahadum ghọrọ privatized, na bụ otu n'ime nanị ole na ole American mahadum na-converted si a kwuo n'ihu ọha alụmdi na a onwe onye.
na 1884, William Preston Johnston ghọrọ onyeisi oche mbụ nke Tulane. Ọ n'oge gara aga n'ọnọdu Robert E. Lee ka president of Washington na Lee University mgbe Lee ọnwụ. Ọ kwagara iji Louisiana ma na-president nke Louisiana State University.
na 1885, mahadum ike ya gụsịrị akwụkwọ nkewa, mgbe e mesịrị ghọọ Ukpep School. Otu afọ mgbe e mesịrị, onyinye si Josephine Louise Newcomb totaling n'elu $3.6 nde, dugara oruru nke H. Sophie Newcomb Memorial College n'ime Tulane University. Newcomb mbụ ahazi mahadum n'ihi na ndị inyom na United States na ghọrọ ihe nlereanya ka ndị dị otú ahụ oru dị ka Pembroke College na Barnard College. na 1894 na College of Technology kpụrụ, nke mesịrị ghọọ onye School of Engineering. N'otu afọ, mahadum kpaliri ya n'oge uptown campus na akụkọ ihe mere eme St. Charles Avenue, ise kilomita site ụgbọala si ogbe ndịda New Orleans.
Na ndozi na Tulane University ke mbubreyo narị afọ nke 19, Tulane nwere a atọ ntọala siri ike na-ewu dị ka Premiya mahadum nke Deep South wee na a ketara na ibu ke narị afọ nke 20. na 1901, mbụ nkuku tọrọ maka F.W. Tilton Library, nyere site New Orleans na-azụ ahịa na philanthropist Frederick William Tilton (1821-1890). n'oge 1907, ụlọ akwụkwọ ike a afọ anọ ọkachamara usoro ọmụmụ na ije site na College of Technology, na-eto eto-emecha n'ime Tulane School of Architecture. Otu afọ mgbe e mesịrị, Ụlọ Akwụkwọ nke Dentistry na Pharmacy e, albeit nwa oge. The School of Dentistry biri na 1928, na Pharmacy afọ isii mgbe e mesịrị. na 1914, Tulane guzosie ike a College of Commerce, mbụ azụmahịa ụlọ akwụkwọ na South. na 1925, Tulane guzobere onwe ha Ukpep School. Mgbe afọ abụọ gasịrị, mahadum melite a School of Social Ọrụ, bụkwa onye mbụ na ndịda United States. Tulane bụ instrumental n'ịkwalite nkà na New Orleans na South na guzosie ike Newcomb School of Art withWilliam Woodward ka director, otú guzosie ike ma ama Newcomb ite. The Middle American Research Institute e guzobere 1925 na Tulane “maka nzube nke elu nnyocha n'ime akụkọ ihe mere eme (ma Indian na colonial), nkà mmụta ihe ochie, ebe okpomọkụ botani (ma akụ na ụba na ike), na eke ego na ngwaahịa, nke mba n'ihu New Orleans gafee mmiri nke dị n'ebe ndịda; ịchịkọta, index na disseminate data gasịrị; na inyere na-ewuli elu nke kacha mma azụmahịa na mmekọrịta enyi na enyi n'etiti ndị a Trans-Caribbean iche iche na United States.”
University College e guzobere 1942 ka Tulane si n'ìgwè nke nọgidere na-akụziri. site 1950, na School of Architecture toro nke Engineering n'ime otu nọọrọ onwe akwụkwọ. na 1958, mahadum a họpụtara ka Association of American Universities, nzukọ esịnede iri isii na abụọ nke na-eduga nnyocha mahadum North America. The School of Public Health na Tropical Medicine ọzọ bịara nwere onwe si School of Medicine na 1967. Guzobere na 1912, ọ bụ achọghị ịzụ otu n'ime ndị mbụ ahụ ike ọha na ụlọ akwụkwọ na United States. Tulane si School of Tropical Medicine na-anọgide naanị otu ụdị na mba. on April 23, 1975, President Gerald R. Ford, Obere, kwuru na Tulane University nke Fogelman Arena na òkù Congressman F. Edward Hebert, a nnọchiteanya nke Louisiana na 1st Nzukọ District. N'oge ahụ mere ihe akụkọ okwu, Ford mara ọkwa na Vietnam Agha bụ “okokụre dị ka America na-echegbu” - otu izu tupu ọdịda nke Saigon. Ford sere aghota na Agha nke New Orleans, na-ekwu na ndị dị otú ahụ mma ọrụ nwere ike imere America morale ihe agha mere na 1815.
N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, Tulane bụ otu n'ime 131 kọleji na mahadum mba na wee akụkụ ke V-12 Navy College Training Program nke nyere ụmụ akwụkwọ a ụzọ ka a Navy ọrụ.
A ndekọ zuru ezu banyere ihe ndị mere Tulane University si ya tọọ ntọala site na 1965 e bipụtara site Dyer.
na July 2004, Tulane natara abụọ $30 nde onyinye ya onyinye, ndị kasị ibu onye ma ọ bụ jikọtara onyinye na mahadum akụkọ ihe mere eme. The onyinye si Jim Clark, a so na mahadum osisi nke trustees na nchoputa nke Netscape, na David Filo, a gụsịrị akwụkwọ na ya School of Engineering na ngalaba-nchoputa nke Yahoo!. A ego-mkpọlite ​​mkpọsa a na-akpọ “nkwa & Ókè” welitere $730.6 nde dị ka nke October 3, 2008, amụba mahadum ngụkọta onyinye karịa $1.1 ijeri; site March 2009, Yvette Jones, Tulane si Chief Operating Officer, gwara Tulane si Staff Advisory Council na onyinye “ka furu efu nso 37%”, emetụta mbubreyo-2000s nlaazu.
na April 2010, na Tulane Admissions ụlọ ọrụ kọrọ na ya natara 44,000 ngwa maka klas nke 2014, agbasa gara aga ndekọ setịpụrụ klas nke 2013. Mgbe enweghị ike iji gosi na ya na eze, na Admissions ụlọ ọrụ kwuru na “ọ na-egosi na anyị nwere ihe ndị kasị ngwa maka abịa ọdịda ọkara afọ agụmakwụkwọ nke ọ bụla onwe mahadum na mba.”
Dị ka a n'ihi nke Ajọ Ifufe Katrina ke August 2005 na ya na-ebibi mmetụta na New Orleans, ọtụtụ n'ime ndị na mahadum e mechiri nke ugboro abụọ ya akụkọ ihe mere eme-nke mbụ ahụ n'oge na-Civil War. The mmechi emetụta mbụ ọkara afọ agụmakwụkwọ nke akwụkwọ kalenda afọ. The School of Public Health na Tropical Medicine na anya mmụta omume na ọmụmụ nọrọ n'ọrụ. The School of Medicine kwagara Houston, Texas maka a afọ. Wezụga na-amụrụ na-eme egwuregwu ịga mahadum ọmụmụ na otu campuses, kasị Undergraduate na gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ chụgara ka campuses ofụri U.S. The oké ifufe kpataara karịa $650 nde ke emebi obosara na University, na ụfọdụ n'ime ndị kasị ukwuu weere impacting na Howard-Tilton Memorial Library na ya collections.
Ihu a mmefu ego shortfall, ndị Board of Administrators mara ọkwa a “Renewal Plan” na December 2005 iji belata ya kwa afọ na-arụ ọrụ ego na ike a “na-amụrụ-centric” campus. Na-agwa okwu na ụlọ akwụkwọ nkwa New Orleans, a N'ezie n'aka ndị metụtara “ọrụ mmụta” ghọrọ ihe a chọrọ maka ihe Undergraduate ogo. na 2006 Tulane ghọrọ ndị mbụ Carnegie họọrọ “elu research ọrụ” alụmdi nwere Undergraduate ọha ọrụ ngụsị akwụkwọ chọrọ. Na Mee 2006, ngụsị akwụkwọ ememe gụnyere malitere ọkà okwu mbụ Oche George H. W. Bush na Bill Clinton, onye jara ụmụ akwụkwọ maka na ha chọrọ ka ha laghachi Tulane na-eje ozi New Orleans ya ọhụrụ.
Ị chọrọ atụle Tulane University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Tulane University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Tulane University.